Ukuguqulwa kobisi, inqolobane e-North Pembrokeshire - I-Airbnb
Ukuguqulwa kobisi, inqolobane e-North Pembrokeshire
Pembrokeshire, Wales, i-United Kingdom
Ubisi luwukuguqulwa kwenqolobane esanda kulungiswa epulazini elisebenzayo e-North Pembrokeshire. Sigcwele ubuntu obunemibala egqamile kuyo yonke i-. Umnyango ozinzile uvula ekhishini/endaweni yokudlela enamabhilidi aphansi kanye nesiqhingi esikhulu sekhishi. Ikamelo lokuhlala linethezekile futhi liheha ngesihlalo esigoqayo nesitsha sokushisa ilogi. Phezulu endlini kukhona igalari ebiyelwe ngengilazi enamakamelo okulala amabili ngalinye elinekamelo lokulala. Ingadi yangaphambili inokubukeka okuhle kwepulazi elinendawo yokuhlala kanye nendawo yokupaka.
Ubisi luguqulwe lwaba yindinganiso ephakeme ngamabhande e-okhi, i-slate yokwamukela kanye nokufakwa kwekhwalithi kanye nokufakwa. Siyayithanda indawo yokufunda ethokomele enesihlalo sethu seqanda esilengayo kanye nendawo yethu yokuhlala engaphandle nengadi kulungele ukuhlala ngaphandle kusihlwa. Ingadi iyisibambo selanga ngokuphelele.
Zombili izindlu zokulala zinemibhede elala abantu ababili namagumbi okugezela angaphakathi. Igumbi lokugezela elilodwa lineshawa futhi elinye linobhavu.
Izinto zombhede ziyahlinzekwa kodwa asinikezi amathawula futhi sicela izivakashi ukuthi zilethe ezazo.
Ikamelo lokuhlala line-log burner kanye ne-freesat TV.
Ikhishi liqukethe yonke imishini esicabanga ukuthi uzoyidinga- umpheki, ifriji/i-freezer, i-microwave, iketela kanye ne-toaster kanye netafula elikhulu lokudlela le-okhi.
Ipulazi litholakala e-Llancyhaer, idolobhana elincane eline-pub nokuhambahamba okubabazekayo. Ipulazi ngokwalo liziqhayisa ngama-acres angu-70 ehlathi langasese ngezinyawo ezinhle. Singamakhilomitha angu-3 ukusuka edolobhaneni lase-Newport futhi amamayela angu-2 ukusuka e-Fishguard. Zombili lezi zinezinhlobonhlobo zama-pub, izindawo zokudlela nezitolo.
Indlwana ime kahle ekuhloleni yonke i-Pembrokeshire. Amabhishi ethu aseduze angamakhilomitha angu-3 (i-Newport sands, i-Cym Yr Eglwys ne-Goodwick). Siyakwazi ukukunikeza noma yimiphi imininingwane yendawo ongathanda futhi sishiya iziqondiso zezindawo ezithandwayo kuleyo ndlwana.
Sivumela inja eyodwa ukuthi ihlale mahhala. Inja yesibili yamukelekile kodwa sikhokhisa isengezo esingu-15 sokuhlanza okwengeziwe okuhilelekile.
Siphila epulazini futhi kukhona enye indlwana yeholide epulazini futhi ngakho siyatholakala uma usidinga. Siyathanda ukuhlangana nezivakashi zethu kodwa futhi sifuna ukuhlonipha ubumfihlo bakho ukuze sibe nenqubo yokuzingenela.
Hlola ezinye izinketho ezise- Pembrokeshire namaphethelo